साहित्य सरिता – Page9– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
४ आश्विन २०७७, आईतवार ००:४४ English
कविता महोत्सवमा कवि बल प्रथम ९ असार २०७५, शनिबार २१:४७
‘मेरो सृजना ‘नदिया लहर’को साथमा यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु’ ४ असार २०७५, सोमबार २२:२२
न्युयोर्क । अमेरिकन डाएस्पोराको सशक्त हस्ताक्षर नदिया लिवाङको पहिलो कविता संग्रह “नदिया लहर” न्युयोर्कमा सार्वजनिक गरिएको छ । वाणिज्यदूत एवं साहित्यकार कृष्ण कुमार क्षेत्रीले गत शनिबार न्युयोर्कमा आयोजित एक कार्यक्रममा 'नदिया लहर' सार्वजनिक गरेका थिए । अमेरिकन डाएस्पोरामा..
सञ्चारकर्मी अधिकारीको ‘आधा आकाश’ बजारमा २६ जेष्ठ २०७५, शनिबार २१:१५
काठमाडौँ, २६ जेठ । सञ्चारकर्मी प्रवेश अधिकारीको पहिलो उपन्यास ‘आधा आकाश’ बजारमा आएको छ । चितवनमा लामो समय रेडियो प्रस्तोताको रुपमा काम गरी अध्ययनका लागि बेलायत पुग्नुभएका लेखक अधिकारीले लेख्नुभएको २२३ पृष्ठ लामो उपन्यासमा विद्यार्थी भिसामा बेलायत पुगेका युवायुवतीको भोगाइ र..
‘दर्नाल अवार्ड’ सरस्वती नेपालीलाई २५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १९:१६
काठमाडौँ, जेठ २५ (रासस)ः यस वर्षको ‘सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘दर्नाल अवार्ड’ बैतडीकी अभियन्ता सरस्वती नेपालीलाई प्रदान गरिने भएको छ । दलित समुदायका लागि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरस्वतीले पु¥याएको योगदानको मुल्यांकन गर्दै सन् २०१८ को अवार्ड उहाँलाई प्रदान गर्न..
पत्रकार लम्सालको ‘नि हाउ ! नमस्ते !’ सार्वजनिक १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार २३:५३
काठमाडौँ, १६ जेठ । लामो समयदेखि रेडियो पत्रकारितामा संलग्न पत्रकार लक्ष्मी लम्सालको ‘नि हाउ ! नमस्ते !’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । बुलबुल पब्लिकेशनद्वारा प्रकाशित पुस्तक आज एक कार्यक्रमबीच विभिन्न क्षेत्रका सञ्चारकर्मीले सामूहिकरूपमा सार्वजनिक गर्नुभयो । पुस्तकमाथि वरिष्ठ..
‘उत्तम शान्ति पुरस्कार’ शर्मालाई १२ जेष्ठ २०७५, शनिबार २२:१०
काठमाडौँ, १२ जेठ । विसं २०७४ को ‘उत्तम शान्ति पुरस्कार’ गैरआख्यानकार दीनानाथ शर्मालाई प्रदान गरिएको छ । ताम्रपत्र र नगद रु ५० हजार राशिको यो पुरस्कार विसं २०४४ देखि प्रदान गरिँदै आइएको छ । उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठीमा प्राप्त गैरआख्यानका साहित्यिक कृतिमध्येबाट छनोट समितिले..
‘पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार’ तीन स्रष्टालाई ७ जेष्ठ २०७५, सोमबार ००:३३
काठमाडौँ, ६ जेठ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार’ विभिन्न विधामा तीन स्रष्टालाई प्रदान गर्ने भएको छ । राजनीतिक–सैद्धान्तिक विधामा तनहुँ रम्जकोटका लक्ष्मीभक्त उपाध्याय लम्साल, इतिहास विधामा कास्की मादीका डा जगमान गुरुङ तथा साहित्य,..
‘देशको माटो’ कविता संग्रह सार्वजनिक २९ बैशाख २०७५, शनिबार २३:५३
काठमाडौँ, २९ वैशाख । कवि हेमनाथ घिमिरेको ‘देशको माटो’ कविता संग्रह सार्वजनिक भएको छ । सिसार साहित्य समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा ४५ वटा कविता समेटिएको संग्रह लोकार्पण गरियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले कवितामा प्रयोग हुने एउटै शब्दले..
निशाना छापका सर्जकलाई ‘भवानी पदमा’ पुरस्कार १७ बैशाख २०७५, सोमबार २३:२३
दमक, १७ वैशाख । गणतन्त्र नेपालको निशाना छापका सर्जक हिमालय गौतमलाई ‘भवानी पदमा’ पुरस्कारबाट सम्मान गरेकोे छ । झापा दमक–१० आमबाडीस्थित गौतम कुल वंश प्रतिष्ठानमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँलाई सो पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको हो । सो पुरस्कारका संरक्षक ८६ वर्षीय पण्डित भवानीप्रसाद..
कलाकार गेहेन्द्रमान अमात्य, प्रा उषा ठाकुर तथा स्नेह पोखरेललाई ‘गोधुली साहित्य सम्मान’ ८ बैशाख २०७५, शनिबार ००:३८
काठमाडौँ, ७ वैशाख । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले साहित्यकारले नेपालको प्राकृतिक तथा भौगोलिक सुन्दरतालाई आधार बनाएर साहित्य सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गोधूली साहित्यिक प्रतिष्ठानको सातौँ वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा..
बेलायतमा साहित्य सन्ध्या र पुरस्कार वितरण २५ चैत्र २०७४, आईतवार २३:०६
लन्डन । नेपाली डायस्पोरा साहित्य अन्तर्गत बेलायतको पुरानो साहित्यिक संस्था नेपाली साहित्य विकास परिषद यूकेको आयोजनामा लन्डनमा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर बिहिबार साँझ वेम्बलीमा आयोजित साहित्य सन्ध्या कार्यक्रममा कविता वाचन तथा साहित्य पुरस्कार..
विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन बेलायतमा साउनमा हुने १८ चैत्र २०७४, आईतवार ००:०३
काठमाडौँ, १७ चैत । विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ, विश्व केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘दोस्रो विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलन’ आगामी साउन २६–२७ गते बेलायतमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनका निम्ति केन्द्रीय सचिव केदार संकेतको संयोजकत्वमा ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको महासङ्घका..
सामाजिक अभियन्ता एवं लेखक कर्ण शाक्यको ‘हाम्रो नेता यस्तो होस्’ बजारमा १२ चैत्र २०७४, सोमबार २३:४४
काठमाडौँ, १२ चैत । सामाजिक अभियन्ता एवं पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको ‘हाम्रो नेता यस्तो होस्’ नामक कृति बजारमा आएको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको करीब सात दशक भए पनि राजनीतिक अधिकार सबै जनताले उपयोग गर्न नसकेको, जनताको जीवनस्तर सुधार हुन नसकेको, नेताहरु नसुध्रेको र चुनावमा राम्रो..
वादी महिलाको जिवन कथामा आधारित सरस्वती प्रतिक्षाको उपन्यास ‘नथिया’ बजारमा ६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०८:०६
काठमाडौं । कविताको क्षेत्रमा कलम चलाउदै आएकी चिर परिचित साहित्यकार सरस्वती प्रतिक्षा ‘नथिया’ मार्फत उपन्यासकारको रुपमा पाठकहरु माझ उपस्थित भएकी छिन । वादी समुदायको महिलाका विषयमा केन्द्रित साहित्यकार सरस्वती प्रतिक्षाको ‘नथिया’ उपन्यासलाई उमा वादीले लोकार्पण गरेपछि नेपाली..
सर्वज्ञ वाग्लेको पुनर्वासदेखि अमेरिकासम्मको साहित्यिक यात्रा ११ मंसिर २०७४, सोमबार ०३:५१
सन्फ्रान्सिस्को । सर्वज्ञ वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय सुदुर पश्चिमेली समाजका प्रथम उपाध्यक्ष तथा लेखक हुन्। तनहुँमा जन्मिएका वाग्लेको बालापन महेन्द्रनगरको पुनर्वासमा वित्यो । त्यहीबाट औपचारिक अध्ययन पुरा गरेका वाग्लेले कैलालीबाट बिएसम्मको अध्ययन पुरा गरेका थिए। केही समयको..
साहित्यकार फुलाराको ‘टुहुरो कुण्डली’ सार्वजनिक १४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०६:५६
काठमाण्डौं । साहित्यकार भीष्म फुलारालिखित उपन्यास ‘टुहुरो कुण्डली’ सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा शनिबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पुस्तक विमोचन गरे । विमोचनपछि पुस्तकबारे रेग्मीले टिप्पणी गर्दै भने, ‘टुहुरो कुण्डली निकै मर्मस्पर्शी..